အကြင်နာနန်းတော်: ခြွင်းချက်မဲ့တဲ့ အချစ်ပုံပြင်
ဟိုရှေးရှေးတုန်းက ဗာရဏသီပြည်မှာ ဗြဟ္မဒတ်မင်းကြီး ထီးနန်းစိုးစံတော်မူနေတဲ့ အချိန်မှာ အတူနေကြတဲ့ ရဟန်းတော် ခုနစ်ပါး ရှိသတဲ့။ သူတို့ဟာ တောရဆောက်တည်ပြီး ဂူကြီးတစ်လုံးထဲမှာ အတူတကွ သီတင်းသုံး နေကြသတဲ့။ သူတို့ထဲမှာ အပြေအပြစ် ပြောတတ်ဆိုတတ်ပြီး ထူးထူးခြားခြား ချစ်ခင်ကြင်နာတတ်တဲ့ ရဟန်းတစ်ပါးကို ဦးစီးခေါင်းဆောင် တင်မြှောက်ထားကြသတဲ့။
ဆရာတော် ခုနစ်ပါးဆိုတာကတော့ ဦးစီးခေါင်ဆောင်ဆရာတော်၊ သူ့ရဲ့ ညီရဟန်းတော်၊ သူ့ရဲ့ မိတ်ဆွေရဟန်းတော်၊ သူ့ကို အမျိုးမျိုး ကလန်ကဆန်လုပ်ပြီး အမြဲတမ်း ဆန့်ကျင်နေတတ်တဲ့ ရဟန်းတော်၊ အချိန်မရွေး သေနိုင်လောက်အောင် နာမကျန်း ဖြစ်နေတဲ့ ဂိလာန ရဟန်းတော်၊ သေရက်စောင့်နေရတဲ့ အိုမင်းမစွမ်း ရဟန်းတော် နဲ့ တရားတစ်လုံးမှ မသိတဲ့ ဆန်ကုန်မြေလေး ရူးကြောင်ကြောင် ရဟန်းတော်တို့ ဖြစ်ကြသတဲ့။
တစ်နေ့တော့ ခိုးသားဓားပြ အုပ်စုတစ်စုဟာ ဆရာတော်တွေ သီတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့ ဂူကြီးကို တွေ့ရှိသွားပြီး အဲဒီဂူမှာ စခန်းချဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသတဲ့။ ဒီတော့ အရင်ရောက်နှင့်တဲ့ ဆရာတော်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ လိုတာပေါ့။ ဖယ်ရှားပစ်ရုံတင် ဘယ်ကမလဲ အဲဒီ ဂူကြီးထဲမှာ သူတို့စတည်းချနေတယ် ဆိုတဲ့သတင်း မပေါက်ကြားရအောင် နှုတ်ပိတ်တဲ့ အနေနဲ့ ဆရာတော်တွေကို သုတ်သင်ပစ်လိုက်ဖို့ပါ လိုတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဆရာတော်တွေ ကံကောင်းတယ် ပြောရမလားပဲ။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယ်လို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အပြောကောင်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆရာတော်က ဓားပြတွေကို အမျိုးမျိုး လှည့်ပတ်နားချပြီး သဘောတူညီမှုတစ်ခု ရယူလိုက်နိုင်သတဲ့။ (ဘယ်လို နားချလိုက်သလဲ မပေးပါနဲ့။) ဆရာတော် ခုနစ်ပါးထဲက ခြောက်ပါးကို သွားလိုရာသွားခွင့် ပေးရမယ်၊ တစ်ပါးကိုတော့ စံပြအနေနဲ့ သတ်ပြရမယ်လို့ သဘောတူသတဲ့။ ခြောက်ပါးရဲ့ ရှေ့မှာ တစ်ပါးကို သတ်ပြပြီး ခြိမ်းခြောက် နှုတ်ပိတ်မယ့် သဘောပေါ့။ သတင်းပေါက်ကြားသွားရင် ကျန်တဲ့ဆရာတော်တွေကိုပါ လိုက်သတ်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။
ဘာကိုမှ မငဲ့ကွက်ဘဲ လုပ်ချင်သလို လုပ်လိုက်နိုင်၊ ကြမ်းချင်သလို ကြမ်းလိုက်နိုင်၊ ရမ်ချင်းသလို ရမ်းလိုက်နိုင်တဲ့ သူခိုးဓားပြတွေဆီက နှိုက်ယူလိုက်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးဟာ အကောင်းနဲ့အဆိုး ခြောက်အချိုးတစ် ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ တော်တော်သက်သာတယ် ပြောရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက ဘယ်ဆရာတော်ကို သတ်ခွင့်ပေးလိုက်ရမလဲ ဆိုတာကို ခေါင်းဆောင်ဆရာတော် မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေသတဲ့။
ခေါင်းဆောင်ဆရာတော်ဟာ သီတင်းသုံးဖော် အားလုံးကို ခြွင်းချက်မဲ့တဲ့ အချစ်နဲ့ တစ်ပြေးတည်း တစ်သားတည်း ချစ်ခင်ကြင်နာတော်မူသတဲ့။ ညီမို့၊ ညီမှ၊ မိတ်ဆွေမို့၊ မိတ်ဆွေမှ စတဲ့စတဲ့ အခြေအနေတွေ အငြိုးတွေ အစွဲတွေက ဆရာတော်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို မထိန်းချုပ် မကန့်သတ်နိုင်ကြဘူး . . . တဲ့။
သူလိုငါလို သာမန်လူတွေ၊ သာမန်ဘုန်းကြီးတွေအတွက် ဆိုရင်တော့ အဖြေက ရှင်းနေတာပါ။
ညီရဟန်းတော် နဲ့ မိတ်ဆွေရဟန်းတော်ကိုတော့ အခွင့်ထူး ပေးရမယ်။ သူတို့ကို အသေခိုင်းလိုက်လို့ မဖြစ်ဘူး။
“ဒါ ခွင်ကောင်းပဲ။ ငါ့ကို အမြဲတမ်း ကလန်ကဆန်လုပ်တဲ့ကောင် သွားကွာ”ဆိုပြီး အမြဲတမ်း ဆန့်ကျင်ဘက် လုပ်နေတဲ့ ရဟန်းတော်ကို အသတ်ခိုင်းလိုက်မယ်။
ဒါမှမဟုတ် နာမကျန်း ဖြစ်နေတဲ့ ရဟန်းတော် နဲ့ အိုမင်းမစွမ်း ရဟန်းတော်တို့ဟာ သေလူတွေပဲ။ ကျန်တဲ့ ဆရာတော်တော်တွေရဲ့ လွတ်မြောက်ခွင့်နဲ့စာရင် သူတို့ဟာ တန်ဖိုးမရှိလှပါဘူး။ သူတို့ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရလို့ ဘာမှ အကျိုးမယုတ်နိုင်ပါဘူး။ သေကြပေါ့။
ဒါမှမဟုတ် ဆန်ကုန်မြေလေး ရူးကြောင်ကြောင် ရဟန်းတော်ကရော နှမြောစရာ မို့လား။ သူ့အတွက်ရော သူတစ်ပါးအတွက်ပါ၊ ပစ္စုပ္ပန်အတွက်ရော သံသရာအတွက်ပါ ဘာအသုံးကျလို့လဲ။ သေလိုက်စမ်း။
ဒါပေမယ့် ခေါင်းဆောင်ဆရာတော်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ခြွင်းချက်မဲ့တဲ့ ချစ်မေတ္တာတဲ့။ သူရဲ့ နှလုံးသားတံခါးဟာ အချိန်တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ လူတိုင်းအတွက် လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီး ဖွင့်လှစ်ထားပါသတဲ့။ သူမေတ္တာနဲ့ မထိုက်တန်သူရယ်လို့ လောကမှာ မရှိဘူးတဲ့။
ဒါဆိုရင်၊ ခေါင်းဆောင်ဆရာတော်ကြီးဟာ အားလုံးကို အညီအမျှချစ်လို့ ဘယ်သူကိုမှ မသေစေချင်ဘူးဆိုရင် အားလုံးအတွက် အနင့်နာခံပြီး သေပေးလိုက်သင့်တာပေါ့။ “ငါ့ကိုသတ်ပါ။ သူတို့ သွားလိုရာ သွားပါစေ”လို့ ပြောလိုက်သင့်တာပေါ့။ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ လိုအပ်ရင် အနင့်နာခံရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဆရာတော်ကြီးက သူကိုယ်သူလည်း မေတ္တာထားသတဲ့။ အနင့်နာခံပြီး အားလုံးကောင်းဖို့ သေပေးလိုက်ရင် သူ့ကိုယ်သူ မချစ်ရာရောက်သွားမှာမို့ သူ့ကိုသတ်ပါလို့လည်း ပြောမထွက်ရှာဘူးတဲ့။ သတ္တ၀ါ အားလုံးကို မိမိနဲ့ ထပ်တူ ချစ်တော်မူတာတဲ့။
ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲ။ ခြွင်းချက်မထားဘဲ ချစ်တတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ဆရာတော်ကြီး ဆုံးဖြတ်ချက် မချနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေလေတော့၏ဆိုပြီး ပုံပြင် ဆုံးသွားပါတယ်။
ဖတ်ရတာ ပိုပြီး အဆင်ပြေမလားလို့ သမားရိုးကျ လှပတဲ့ ဇာတ်သိမ်းခန်းလေး ဖြည့်စွက်လိုက်ပါတယ်။
“တစ်ပါးပါးကို နမူနာ သတ်ပြလိုက်ဖို့ ဓားတ၀င့်ဝင့် လုပ်နေတဲ့ ဓားပြဗိုလ်ကြီးဟာ ခေါင်းဆောင်ဆရာတော်ရဲ့ အခက်အခဲကို နားလည်သွားသတဲ့။ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ မေတ္တာတရားကိုလည်း နက်နက်နဲနဲ ခံစားမိလိုက်သတဲ့။ မေတ္တာစူးသွားတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ဘယ်ဆရာတော်ကိုမှ မသတ်ပါရစေနဲ့တော့ ဘုရားလို့ လျှောက်ထားလိုက်သတဲ့။ ဒါတင် ဘယ်ကမလဲ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ထံမှောက်မှာ ခိုးသားဓားပြတစ်ဖွဲ့လုံး ရဟန်းပြုလိုက်ကြသတဲ့။”
Ref: "Opening the Door of Your Heart and other Buddhist tales of Happiness"
Picture from (12 Apr 2011):
ပို့စ်ရေးသားသူ Ashin Acara. ရက်စွဲ Thursday, April 21, 2011